Chii Chiri-mu-Nguva Kushambadzira (JITM) uye Nei Vatengesi Vachigamuchira? | Martech Zone
Chii Chiri-mu-Nguva Kushambadzira (JITM) uye Nei Vatengesi Vachigamuchira?
Muvhuro, June 13, 2016 Mugovera, January 9, 2021 Douglas Karr
Pandaishanda muindastiri indasitiri, ingori-mu-nguva yekugadzira yaive yakakurumbira. Chikamu chekutenda ndechekuti iwe unogona kudzikisira mari yakasungirirwa muchitoro nekuchengetedza, uye kushanda zvakanyanya kuigadzirira kudiwa. Dhata yaive chinhu chakakosha, ichivimbisa kuti isu hatizombopererwa neyakaunganidzwa isu ataida tichikwanisa kuchinjika nekusangana nezvinodiwa nevatengi vedu.
Sezvo hupfumi hwevatengi data hunowedzera kuwanikwa mukushambadzira, makambani anokwanisa kushandisa kushambadzira kwavo nemazvo zvakafanana. Nei uchigadzira gore regorendari yezvirimo iyo inogona kunge isisabatike mumwedzi mishoma? Agile kushambadzira kuedza kunopa mukana wekuti uchinjike asi uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitsvaga nzira dzekushambadzira kwenguva refu dzaiswa uye zvinangwa zvazadzikiswa.
Chii chinonzi Just In Time Kushambadzira?
Kungo-mu-nguva kushambadzira kwakanangana nekugadzira chete yekutengesa zvemukati izvo zvinodiwa, kana zvichidikanwa, uye kuzviisa kune izvo zvinodiwa nevatengi vanofarira chaizvo pavanenge vari mune yekutenga mweya. Mukupesana, nzira dzekutengesa dzakawanda dzakanangana nekugadzira zvirimo zvakawandisa zvine chinangwa chekusvikira vateereri vakawanda. Maererano neongororo, zano iri riri kuratidza kuti harisi kubudirira uye zvinobudirira, sezvo maCMO akataura kuti zvishoma se20 muzana yevatengi vanowanikwa vanofarira chigadzirwa chakasimudzirwa kana kugona kuchitenga. Accenture Inopindirana
Accenture Inopindirana yakaratidza 38% yemakambani sevangori-mu-nguva vatengesi vakawedzera mari yavo yegore negore neinopfuura 25% zvichienzaniswa ne12% chete yevezera ravo. Ivo zvakare vari pamberi peiyo curve maererano neanotevera masimba.
Kuziva tsvina - 82% inoratidzira kuyedza kukuru kudzikisira #kushambadza kushomeka
Right-nguva kushambadza chinja - 57% vanogutsikana kwazvo nekugona kwavo kugovana meseji chaiyo nevatengi panguva yakakodzera
Kugona kuburitsa ruzivo rwevatengi - 87% vane vashandi vane hunyanzvi hwekuongorora kuti vagadzirise zvinonzwisisika zvevatengi
Yakakwirira yedhijitari kusangana - Makambani ekushambadzira-e-nguva-haapatsanure edhijitari yekushambadzira kubva kune yese yavo yekushambadzira sangano, sezvo 58% yakatsanangura yavo yedhijitari uye yechinyakare #market danho senge rakanyatso kubatanidzwa
Rusununguko netekinoroji - 58% vanotaura rusununguko rwakakwana kana zvasvika pakuita sarudzo dzekudyara IT - zvichiratidza kuti hukama hweCIO-CMO hwakura zvakanyanya mukubatana mumakambani ekushambadzira-munguva-chete.
Just-In-Nguva Kushambadzira yave kuita tsika yakajairika, sekuonekwa kuno kubva kuAccenture Interactive research.
Nekutora ingori-in-nguva maitiro, tiri kuona anotungamira ekushambadzira masangano kuvhura kukosha iyo yaimbove yakavharirwa kana kusingawanikwe. Iko kukosha kunowedzera kazhinji kubva kungori-mu-nguva vatengesi kugona kugona mutengi panguva chaiyo yekuda uye kubva pakudzivirira kupambara. Paul Nunes, maneja maneja, Accenture Institute for High Performance.
Matanho akakosha munzira inoenda kungo-in-nguva kushambadzira
Masangano ekushambadzira anoda kushandurwa kuita -nguva-in-nguva Masangano anofanirwa kufunga nezvekurudziro inotevera:
Gonesa mashandiro. Simbisa mashandiro uye dzidzisa vanhu kuti vaite nekukurumidza; kuita zvine hungwaru uye nekuwedzera nimbly; kunhonga nzwisiso uye kutendeuka navo mumazuva kana vhiki, kwete mwedzi. Isa tarenda uye sarudzo padhuze nepamberi mutsara, unganidza zviono uye uzviite. Gonesa chimiro chako chehutongi uye ita shuwa kuti iwe unoziva kuti ndiani anozvidavirira uye ane chekuita nesarudzo yega yega, kubvisa matanho enhanho uye handoffs pazvinogoneka.
Iva “muteereri” anobudirira. Teerera kuburikidza nevezvenhau vezvenhau kuti cues atore matanho nekukasira, uye uve wakasununguka kushandisa dhata risina kurongeka kuita sarudzo zvichibva mukubatanidzwa kwedata-based insights uye zvisikwa.
Gadzirisa zvekutungamira zviratidzo kwete kwete zvevanhu vazhinji. Seta iyo unit yekuongorora pakusangana kwega kwega pamwe neyakafara nzira yemushandirapamwe senzira yekuzadzisa huwandu hwakazara pakati pekudyidzana kwevatengi. Hazvina kudikanwa chete kugadzirisa ruzhinji nhasi, asiwo kufunga nezvevaya vanofanotaura zvichave zvakasarudzika mune ramangwana.
Tags: AccentureAccenture InopindiranaNdizvozvocmomutengi nzwisisokusangana kwedhijitariKugadzirisakusanganajitmnguva cheteIngori munguva yekushambadzirazvinotungamira zviratidzomuteereriachiteererakushambadzira kushandukaKushambadzira optimizationkushambadzira tsvinaoptimizationpaul nunesdongo
Maitiro Ekuvandudza Kubatikana paMusangano Wako Unotevera
Uchishandisa Inopindirana Midhiya kukwidziridza yako B2C Kukwidziridzwa
Jun 15, 2016 pa8: 50AM